Kungekudala bekukho inkolelo yokuba isidlo sasekuseni ebhedini yinto yokunethezeka evunyelwe kuphela kwiindawo eziziwayo. Nangona kunjalo, amaxesha atshintsha, kunye nabo, ukunyenga kunye nemibono iyatshintsha. Into efanayo yenzeke kunye nembono yesidlo sasekuseni embhedeni, njengento yokunethezeka. Mhlawumbi, akusiyo imeko okanye i-whim, kodwa nje umnqweno wokukholisa kuphela umthandayo ovusayo, bonisa ukukhathazeka kwakho-inkomishi yekhofi ecocekileyo okanye ijusi eliqabulayo ... Ukunyamekela kunokuba kuhle, kwaye oku kuya kuphunyezwa ngokungazi imithetho ethile.
Umthetho owodwa: ukhetha imenyu yesidlo sasekuseni
Ifomu yomzimba kunye nomntu wesithandwa ngumntu onoxanduva lwakho kunye nesimo sengqondo eshaqisayo. Ngoko ke, kungcono ukuba ucele ngokukhawuleza imveliso yeekhalori eziphantsi, kunye nemenyu, akukho mfuneko yokwenza umthendeleko wesidlo kwasekuseni. Ukupheka kweeholide - ngokwahlukileyo, kodwa okwangoku ungakwenza kunye nelokuba lihleli efrijini, kuphela ukunyamekela oku kwangaphambili. Ziqhamo ezintle izityalo ezintsha, inkomishi yekhofi, ijusi ... Ngeziqhamo nje - nqunywe ngokucokisekileyo, xuba, yongeza i-yogurt ephantsi, unokwenza i-ayisikrimu, kodwa ingabi yiqhwa! Isiqhamo singcono ukuthatha isixa esifanayo. Ngendlela, i-lettuce ayifanele "iqhube" kwindawo yokuthulula.
Ngethuba lekhofi: ngokwenene nayo umbuzo wakho ubulumko, kuya kuba kuhle kusengaphambili, kodwa nangaphandle kokuphenywa okuqhubekayo, ukufumana ibakala elithandayo, ukugaya, ushukela okanye ukhilimu ... I-Cream - ilingo elongezelelweyo. Musa ukulibala malunga nokubonakala kwimizimba yomntu othandayo, ngoko ke sebenzela ukhilimu ngokwahlukileyo kwi-thrush ekhethekileyo evela kwinkonzo. Mhlawumbi abantu abayithandi ikhofi nonke? Indawo iya kuba neyeyayi kwikomidi yakho oyithandayo. Enhle kwaye ifudumala-ayinakunzima.
Abasetyhini bayazi ukuba indoda iya kukhetha ukugqoka ngokukhawuleza kusasa, ngoko kukuhle ukuphosa iibhanki ezimbini kwi-pan yokutshiza kwaye ubeke umlilo omkhulu kwaye wubetha ngokukhawuleza amaqanda ambalwa kwisitya ... Jikela i-bacon uphinde uthule iqanda, ufefe yonke into enomhlaza kunye nemifuno. Kwaye iqhawe lakho liya kuvela emagxeni, ungaqiniseki!
Ukuhluka kweempilo zesidlo sasekuseni kuyimfuneko ngakumbi kwimveliso ngenxa yesidingo sokongeza iivithamini kunye neeprotheni emzimbeni, ngoko ukhethe iqanda elithambileyo. I-Cottage cheese, kodwa ingabi ngaphezu kwebala. Ukukhonza iziqhamo zesithelo kunye nejusi. Ngokuphathelele ikhofi, mhlawumbi, awuyi kukhumbula, kodwa kunokwenzeka.
Ummiselo omibini: umangaliswe kwisiqingatha sakho
Izihlwele zinomhlaba omele ukhunjulwe ixesha elide. Kwaye kwizinto ezincinci okwazi ukubonisa isimo sakho sengqondo, bonisa intlonelo kumntu wakho othandekayo, ubonise ukuba kukho izinto oziqondayo kwaye akukho nto ebaluleke kunokuba yena ... Kuyabonakala ukuba oku akusiyo into ephakamileyo - ukuvuka kumabhere, ukuva endlebeni ... Ukubona kuqala ubuso obunzima ekuseni ... Kubalulekile ukubonisa, ukubonisa, umdla kunye nokumangalisa.
Isidlo sakusasa sinamathuba amaninzi okubonakalisa isimo sakho sengqondo kunye nokumangalisa ngokukwazi ukuthandana! I-Napkin ngobhaliso obumnene okanye imibongo, i-rose e-fresh fresh, efakwe kwiglasi evulekileyo kwaye iyancipha, njengokungathi ngengozi, idilesi yeepalali kunye neenyembezi kwi-tray ... Yaye indlela enomdla kwaye ujabulise umntu ukubona kwiphepha lekusasa iphephandaba lakhe elithandayo, , ukuze ungabonakali! Uya kukhangela eli phephancwadi kuwe, xa ephinde ebona kwaye eqonda ukuba uyabahlonela kwaye uyayikhumbula iminqweno yakhe. Yongeza umculo olula, ozolileyo kunye onokuthula njengengqungquthela, yenza ukukhanya kusasa, kwaye uza kuzibona ukuba ulungiselele kwaye wakhonza le sakusasa ngentliziyo yakho yonke ...
Umthetho wesithathu: ungalibali ngokukhuseleko!
Ukucinga kwangaphambili kusindisa iziqalo ezilungileyo! Ukunyamekela kubangele kuba yingxaki ... Ukubonelela - oku akuthethi ukuba ukhangele phambili, kodwa ezinye iimeko ziyakwazi ukuqikelelwa ngeendlela ezahlukeneyo.
Kwaye umonde kunye nomnqweno onyanisekileyo wokugqithisa izinto ezincinci ezinokuthi zingabonakaliswa ngokulula - zisela ukutya kwasekuseni ekulala. Ingxabano yejob, amagama angenamaqhinga, inzondelelo, umsindo, ukungavumelani, umnqweno oqhelekileyo ukuba "ukuluma" kancane - zonke ezi zidlulayo. Kodwa kubalulekile kungekhona nje ukuvuma iimpazamo zakho, kodwa ukubonisa ukuba yiyiphi into ephazamisayo le nto yonke, ngokuthelekiswa nawe ... ngaphandle kwesohlwayo, yabona ukuba yintoni ikhofi enhle eyenziwa, yinto ephilileyo ehamba egumbini, ekamelweni lethu!
Akusoloko i-friji epheleleyo iyakunceda ukugqithisa iimvakalelo zezolo, kodwa unokumangaliswa ngomnqweno kunye nobuchule, ungena kwivenkile ekuseni, kuhle ukuba unikele yonke into: jonga, yiyiphi i-omelet enhle yokudla kwasekuseni! Ungaphuzi ikhofi? Ewe, kodwa kusasa kwakhona kukhuthaza itiye eluhlaza. Yaye yongeza ngakumbi kwaye ibeka iinyawo zayo, kwaye inika amandla kubonakaliso bothando ebusweni bakhe. I-Tray iya kuthwala, malunga noko kwakukho, kwaye musa ukukhumbuza, kwaye uvakalelo lwefudumalo kunye neengqalelo aziyi kulibala ixesha elide.
Musa ukuphazamisa impembelelo yokungabi nantoni! Ukuze ungabuyi kwiimangalo zangoo, zama ukubeka i-tray eduze komntu esele ulele. Namathisela etafileni ecaleni kwakho, lungise indawo ekhethekileyo, apho kulungele ngakumbi ukugcina izitya, kwaye ubakhonze. Ngoko ke, enhle ngakumbi, unonophelo olungakumbi.
Isidlo sakusasa kwisibhedlele: kusekhona i-luxury
Kukho zonke izinto ezifanayo ozifunayo nje ukususela kwimihla ngemihla, ubambe ukuba ushiye iholide. Isiganeko esiqhaqhayo esenzekayo yonke imihla, ngokukhawuleza siphume kwaye salahleka. Shiya enye into enokumangalisa, kuba uziva into entsha kwaye ujabule kakhulu. Emva kwakho konke, ebomini, akufuneki ukuba bonke bakhumbule ngovuyo kunye noxolo. Kwenzeka ukuba ufanele ukhumbule omnye nomnye. Emva koko le nto yokudla kwasekuseni, ehlala ebhedini, ayiyi kukuvumela ukuba uyibale eli xesha elihle elichithwe ndawonye.
Ukwakhiwa kweMichiza ye-mayonnaise
Ukulungiswa kokutya ngo-Eva onguNyaka omtsha
IiVithamini kubafazi abayimfuneko ebusika
Iintlobo nemifuno equkethe i-vitamin D
Ulwimi kwi-sauce eluhlaza
Vula ifowuni ye-oval kwiintliziyo zintsana
Ukunyangwa kwamayeza omntu we-neurodermatitis
Isaladi yebhontshisi ebomvu
Uhlobo lwesini esingavamile ngathi sisisric
Iinjongo ezenziwe nge-vinyl - umkhanyo oqaqambileyo-2016
Iimpawu ezisetyenziswayo ze-chamomile